बुधवार नेप्सेमा ४ अर्ब माथि कारोबार
२०७६ फागुन, १५
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा बुधवार नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ । पछिल्लो १ महीनायता निरन्तर उकालो लागेको बजारमा बुधवार नेप्सेको इतिहासकै सर्वाधिक कित्ता शेयर किनबेच भयो भने कारोबार रकम पनि हालसम्मकै उच्च रह्यो ।
सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकले राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमको नाम सिफारिश गरेको समाचारसँगै बजार तीव्र गतिले बढेको थियो । बुधवारको नेप्सेमा १८० कम्पनीको ९९ लाख ६ हजार कित्ताको शेयर कारोबार भएको थियो भने कारोबार रकम ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ माथि पुगेको थियो ।
कारोबार रकमसँगै नेप्से परिसूचक पनि ५० दशमलव ९३ अंक बढ्यो । यो वृद्धिसँगै नेप्से परिसूचक १ हजार ५९६ दशमलव १३ विन्दुमा पुगेको छ, जुन ३० महीनायताकै उच्च विन्दु हो । यसअघि २०७४ भदौ १४ मा परिसूचक १ हजार ५९८ दशमलव ३६ विन्दुमा थियो ।
बजार पछिल्लो २ सातादेखि बुलिश ट्रेन्डतर्फ उन्मुख देखिन्छ । बुधवार १ हजार ५४७ दशमलव २१ विन्दुबाट शुरू भएको परिसूचक कारोबारको पहिलो आधा घण्टामा सामान्य बढेर १ हजार ५६४ दशमलव शून्य ५ को विन्दुमा पुगेको थियो । नेकपाले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ठाउँमा वामदेव गौतमको नाम सिफारिश गरेको समाचारपछि बजार निरन्तर बढेर बन्द भएको थियो ।
बजारमा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गरेकाले कारोबार रकम र नेप्से पनि उच्च वृद्धि भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । पूँजीगत लाभकर, तरलताको समस्या, नीतिगत सुधार, धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षको सुधारका आश्वासनलगायत पक्षले पनि बजारलाई चलायमान बनाएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
बुधवार नेप्सेमा आठ कम्पनीको कारोबार १० करोड रुपैयाँ माथि रह्यो । यसरी १० करोड माथि कारोबार भएका कम्पनीमा नेपाल लाइफ, शिवम् सिमेन्ट, नेपाल बैंक, हिमालयन डिस्टिलरी, नेको इन्स्योरेन्स, नेपाल इन्स्योरेन्स, गुराँस लाइफ र एनआईसी एशिया छन् । शेयरमूल्य धेरै बढ्ने कम्पनीहरूमा एभरेष्ट बैंक कन्भर्टिभल, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र युनिलिभर नेपाल रहेका छन्, जसको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो । त्यस्तै बुधवार शेयरमूल्य बढेका कम्पनीहरूमा कालिका पावर, गुराँस लाइफ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी संस्थापक, सिभिल लघुवित्त र जोशी हाइड्रो रहेका छन् ।
बुधवार कारोबारमा आएका १२ समूहकै परिसूचक बढेर बन्द हुँदा समग्र नेप्से परिसूचक सकारात्मक रहेको छ । यस दिन सर्वाधिक बढेर बन्द हुनेमा जीवन बीमा समूहको परिसूचक ६ दशमलव १२ प्रतिशत बढेको छ भने उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचक ४ दशमलव ६३ प्रतिशत बढेको छ । यस्तै बैंकिङ, होटल, निर्जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक ३ प्रतिशतभन्दा बढी बढेर बन्द भएको छ भने ‘अन्य’ समूहको परिसूचक २ दशमलव १८ प्रतिशत बढेको छ । त्यसैगरी विकास बैंक समूहको परिसूचक १ दशमलव ५४ प्रतिशत बढेको छ भने व्यापार, जलविद्युत्, वित्त, र लघुवित्त समूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा कम बढेर बन्द भएको छ ।
हालसम्मकै उच्च कारोबार
बुधवार रू. ४ अर्ब १५ करोड ४८ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ३८ दशमलव ८६ प्रतिशत बढी हो । गत कारोबार दिन मंगलवार रू. २ अर्ब ९९ करोड रकम बराबरको कारोबार भएको थियो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन ९ दशमलव ४९ अंक बढेर ३३६ दशमलव शून्य ५ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
४ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट
बुधवार बढेर बन्द भएको बजारमा ४ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ । सर्किट लाग्नेमा एभरेस्ट बैंकको परिवर्तनीय अग्राधिकार शेयर, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, युनिलिभर नेपाल र कालिका पावर कम्पनी रहेका छन् । यस्तै गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापकतर्फको शेयर, सिभिल लघुवित्त र जोशी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ । त्यसैगरी, शेयरमूल्य घटेर कारोबार हुनेमा राधी विद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य ८ दशमलव २९ प्रतिशत घटेको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य रू. १८८ कायम रहेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ७ दशमलव ९६ प्रतिशत घटेर अन्तिम शेयरमूल्य रू. १०४ कायम भएको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार
बुधवार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको १ लाख ५० हजार २८६ कित्ता शेयरको किनबेच हुँदा रू. २१ करोड ९९ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. १ हजार ४९४ रहेको छ । कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रोमा शिवम् सिमेन्टको रू. १८ करोड ४९ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ७२६ कायम छ ।
त्यसैगरी, नेपाल बैंकको रू. १७ करोड ९६ लाख र हिमालयन डिस्टिलरीको रू. १६ करोड ७१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस्तै, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स र एनआईसी एशिया बैंकको रू. १० करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ ।
‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन’ भन्ने नीति व्यवहारमा उतार्न सर्वोच्च अदालतको आदेश [२०७६ चैत, २३]
काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ स्थानमा तोक्यो तरकारी बजार [२०७६ चैत, २३]
निजी अस्पतालमा काम गरेका चिकित्सकले सरकारीमा पनि काम गर्न सक्ने[२०७६ चैत, २३]
खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा रहेका ७३ जनालाई घर पठाइयो[२०७६ चैत, २३]
तथ्यांकमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण (अपडेट )[२०७६ चैत, २३]
‘नेपालमा कोही भोको पर्दैन, कोही भोको मर्दैन’ भन्ने नीति व्यवहारमा उतार्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
कोभिड–१९ को औषधि बनाउन २५ करोड डलर खर्चदै ग्ल्याक्सो
काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ स्थानमा तोक्यो तरकारी बजार
निजी अस्पतालमा काम गरेका चिकित्सकले सरकारीमा पनि काम गर्न सक्ने
उद्योगीद्वारा उद्योग संचालन र बचाउका लागि वातावरण बनाउन उद्योग वाणिज्य महासंघलाई आग्रह